IBanyana Banyana izoqala unyaka ngokubabhizi | News24
IBanyana Banyana izoqala unyaka ngokubabhizi
PHOTO: safa.net Iqembu le-Banyana Banyana ekulindeleke ukuba libhekane ne-France emdlaweni wesihle.
IQEMBU losisi abadala baseMzansi iBanyana Banyana ibonakala ingeke ilinde umdaka onyakeni omusha nalapho izobhekana neFrance emdlalweni wesihle.
Lokhu kukodwa nje kutshengisa kahle-hle ukuthi abaqeqeshi nabaphathi baleliqembu bazimisele ngendlela exakile ukuthi liphumelele ezinhlosweni abanazo noma baze babe semgathweni njengamanye amazwe asethathwa njengezikhondlakhondla ebholeni labesifazane.
Umqeqeshi osabambile kuleliqembu uDesiree Ellis uthi ukudlala imidlalo yesihle eminingi namazwe ahlonishwayo kwenza abadlali bakhe bafunde lukhulu.
“Ukuhlala udlala nezingwazi kuyasiza ngoba phela nawe ugcina ususemgathweni ocishe ufane nabo. Kanti noma usuya emiqhudelweni usuka usuyazi into oyenzayo, noma-ke usuke usufunde lukhulu,”kusho uEllis.
Osisi abadala baseMzansi bazobhekana neFrance emdlalweni wesihle mhlaka 22 kuMasingana eSaint-Denis, e-Reunion Islands, kanti umdlalo uyoqala ngo 9 ebusuku ngesikhathi saseMzansi.
Lomqeqeshi umemezele abadlali abangu 22 abazomela uMzansi ngesikhathi kudlalwa neFrance. Iningi lalabadlali abakade beseqenjini eladla kwi 2016 CAF Africa Women’s Cup of Nations ayayibanjelwe eCameroon.
Ubuso obubili obusha umdlali weqembu lika SAU20 uGabriela Salgado we-JVW FC kanye noZinhle Chabaku we-Bloemfontein Celtic Ladies FC.
Kanti u-Ellis ube esebiza umdlali wasemuva ongazwile uLebohang Ramalepe. Abadlali abakuleliqembu nabadlala phesheya e-USA uJermaine Seoposenwe, ifolosi nonozinti uRoxanne Barker odlala eHolland.
Umqeqeshi weBanyana Banyana uthi umnyango wakhe uyohlala uvulelike ukwamukela abadlali abasha nabasebancane kodwa akafuni ukujasha izinto.